Naya Post Nepal | रि’साए महावीर पुन, सिटामोल दिन्छौ भन्दा कसले के भन्यो ? मेरो कपालको एउटा रौँ पनि हल्लिदैन भन्दै यस्तो लेखे
रि’साए महावीर पुन, सिटामोल दिन्छौ भन्दा कसले के भन्यो ? मेरो कपालको एउटा रौँ पनि हल्लिदैन भन्दै यस्तो लेखे
मुलुकभर सिटामोलको अभाव भएको समााचार सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा सुचना सार्वजनिक गरे । सिटामोलको अति नै अभाव भएको ग्रामिण हेल्थपोष्टलाई आविष्कार केन्द्र बाट ३००० टेब्लेट सम्म दिने प्रयास भैरहेको छ।
सम्पर्क गर्नुृहोला भनेर मोवाइल नम्वर छोडे । पुनको यो पोष्ट सार्वजनिक भएसँगै केहि व्यक्तिले नकरात्मक टिप्पणी गरेका छन् । RC khanal नाम गरेका एक व्यक्तिले कमेन्ट गरे । गोदाममा थन्काएर राखेको बाडेको कि कसो ? कालाबजारी गरेको केसमा तुरुन्त छानबिन होस।
हामि १ पिस नपाउने आविस्कार केन्द्र नामक ग्यारेजमा ३००० पिस कसरि आयो अरुण नेपाली लुइँटेल । यस्तै कमेन्ट गर्ने अन्य पात्रलाई पनि पुनले कमेन्ट मार्फत जवाफ फर्काएका छन् भने सामाजिक संञ्जालमा अर्को पोष्ट गर्दै यस्तो लेखेका छन् ।
पुनको स्टाटस् जस्ताको तस्तै ।
सिटामोल नभएर अत्यन्त दुख पाएका खास गरि ग्रामिण क्षेत्रका हेल्थपोष्टहरुलाई ३००० सिटामोल प्रति हेल्थ पोष्टको दर दिइनेछ सम्पर्क गर्नुहोला भन्दा नानाथरीका कमेन्ट गर्नेहरुलाई मुरीमुरी धन्यबाद छ। संकटको बेलामा र देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने अभियानमा यस्तै बुद्धी निकाल्नु भयो भने नेपाललाई तपाइहरुले छिट्टै नै डुबाउनु हुनेछ र देशको अस्तित्व मेटाउनु हुनेछ । तपाईंहरुको नकारात्मक कमेन्टहरुले मेरो कपालको एउटा रौँ पनि हल्लिदैन। कुरा बुझ्नु होला।
ने रातारात कारखाना बनाएर उत्पादन गर्न सक्ने हामी भुत होइनौं। ति सिटामोलहरु कालाबजारी बाट किनेका पनि होइनन बरु मैले सिटामोलको अभावको बारेमा फेसबुकमा लेखे पछि केहि शुभेक्छुकहरुले सम्पर्क गरेर खोज खाज गर्न सहयोग गर्नु भयो। मैले चीन, अमेरिका र युरोपमा बस्ने साथीहरु संग सिटामोल तुरुन्त ल्याउन सकिने सम्भावनाको बारेमा पनि छलफल गरें र आबश्यक परेमा त्यता बाट पनि ल्याउने कुरा गरियो।
आज कै समाचारहरुमा पनि सिटामोलको अभाब शहर बजारमा छिट्टै नै हट्ने कुरा आएको छ। तर गाउँ गाउँको हेल्थपोष्टहरुमा सरकारी प्रक्रिया पुरा गरेर सरकारले सिटामोल पुर्याउन केहि समय ता पक्कै लाग्नेछ। त्यसैले दुख पाएका गाउँ घरको जनताहरुलाई तत्कालै राहत होस् भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो कदम चालेको हो।
त्यसको लागी पैसा मागेको छैन र माग्ने पनि छैन। कोरोनाको महामारीमा देश विदेश बाट नेपालीहरुले नै दान गरेको र बचेको पैसा बाट सिटामोल किनर दिने हो।
अशोभनीय कमेन्ट गर्नेहरुले याद राख्नु होस् – तपाइँ आफै उद्यमी बन्न चाहनु हुन्छ अथवा तपाइंको छोरा छोरीहरुलाई उद्यमी बनाउन चाहनु हुन्छ भने र अ’नुसन्धानको लागी सहयोग चाहिएमा आविष्कार केन्द्रमा आए हुन्छ। राम्रो आइडिया लिएर आउनेहरुलाई पूर्ण सहयोग गरिने छ।
२०७८ माघ १४, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 67 Views